Ihe niile ịchọrọ ịma banyere Netflix na Spain | Akụkọ akụrụngwa
Netflix na Spain. Ihe niile ịchọrọ ịma banyere ọrụ na-eduga gụgharia ọdịnaya
Pablo Aparicio | | Ihe nkiri na usoro, gụgharia
Ọ karịala otu ọnwa kemgbe ahụ Netflix dị na Spain. Maka ndị na-amaghị, kwuo na Netflix bụ otu n'ime ọrụ kacha mma maka lee gụgharia vidio vidio na mmeri ahụ n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa, ọkachasị na America. O doro anya na ọ bụ ụzọ ọhụrụ nke lelee TV na Spain na Spain. O yikarịrị ka ndị ọzọ amatala ya, mana enwere ọtụtụ obi abụọ ọtụtụ ndị ọrụ nwere. Nwere ike ịkagbu na ndenye aha mgbe ọ bụla ị chọrọ? Kedu katalọgụ dị? Olee atụmatụ na nhọrọ ndị nke ọ bụla na-enye anyị? N'isiokwu a, anyị ga-agbalị idozi ihe niile obi abụọ na i nwere na ọrụ a na, ọ ga-kwuru, bụ ọdịnihu nke ntụrụndụ.
1 Otu esi emepụta akaụntụ na Netflix
2 Etu esi akagbu ndenye aha Netflix
3 Atụmatụ na ọnụahịa
4 Ihe choro
5 Kidsmụaka Netflix
6 Ọ bara uru?
7 Dekọọ ọdịnaya Netflix
8 Usoro maka Netflix
8.1 Jikwaa nchekwa
8.2 Lelee playback Ntọala
8.3 Họrọ nhazi oge
8.4 Mee ka ndepụta okwu gụrụ
8.5 Meziwanye ahụmịhe gị na mgbakwunye maka Chrome
8.6 Jiri VPN
8.7 Jiri mkpirisi kiiboodu
9 Nsogbu Netflix na Movistar
10 Ndị ọzọ na Netflix
Otu esi emepụta akaụntụ na Netflix
1- Ka anyị www.netflix.com/es ma anyị pịa bọtịnụ uhie nke na-ekwu «Malite ọnwa ahụ n'efu».
2- Anyị na-ahọrọ atụmatụ anyị họọrọ.
3- Anyị na-etinye akaụntụ email nke anyị chọrọ ịdebanye aha wee pịa «Gaa n'ihu».
4- Anyị na-agbakwunye usoro ịkwụ ụgwọ anyị ga-eji na njedebe nke ọnwa ikpe.
5- Akara anyị akara ma pịa bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ nke kwuru «Malite ndebanye. Lezienụ mgbe ọnwa ahụ cha chachara n'efu ».
6- Dịka ọ na - enweghị ike ịbụ n’ụzọ ọzọ, anyị pịa “Gaa n’ihu”.
7- Na-esote, anyị na-ahọrọ ngwaọrụ ndị anyị ga-ele Netflix ma pịa na “Gaa n'ihu”.
8- Netflix na-enye anyị ohere iji profaịlụ onye ọrụ dị iche iche. Anyị na-agbakwunye ndị na-enye anyị ohere, ọ bụrụ na-ịchọrọ, wee pịa "Nọgide".
9- N'okpuru ebe anyị na-egosi ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ọ bụla erughị afọ 12. Ọ bụrụ otu a, anyị na-egosi ya ka o nye gị afọ ojuju nke dabara n'ọgbọ gị. Mgbe ahụ, anyị pịa "Gaa n'ihu".
10- Imata onye obula ozo ma nwee ike inye anyi obi uto, n’okpuru anyi ga akara akara nke oma n’aha obula egosiri anyi. Ozugbo anyị akara 3, anyị pịa «Gaa n'ihu».
11- Anyị ga-enwerịrị akaụntụ ahụ. Ugbu a, oge ọ bụla anyị banyere, anyị ga-emepe profaịlụ anyị.
Etu esi akagbu ndenye aha Netflix
Netflix na-enye anyị ohere ịkagbu ndenye aha n'oge ọ bụla. Ọ bụ ezie na enwere ike ịme ya site na ntọala akaụntụ, ihe kachasị dị na ya bụ pịa EGO wee pịa na "Kagbuo nhichapụ". Ọ bụrụ n ’ịchọrọ inweta ozi gbasara ihe a na-agbakwunye, ị nwere ike ịlele igbe (1) Dị ka ị pụrụ ịhụ na onyonyo a, kagbuo ga-adị ire. mgbe oge ndenye aha anyị zuru ma a ga-edebe data ahụ maka ọnwa 10, n'oge nke anyị nwere ike imegharị akaụntụ ahụ mgbe ọ bụla anyị chọrọ.
Atụmatụ na ọnụahịa
Dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo gara aga, Netflix dị na atụmatụ ndị a:
Nhazi: na a ọnụahịa € 7,99, Naanị anyị nwere ike ịhụ ọdịnaya ya ihuenyo n'otu oge ahụ. Ọ dị naanị na SD mma, nke zuru ezu maka ọtụtụ ngebichi, mana nkwụsịtụ ntakịrị ma ọ bụrụ na ihuenyo dị n'ime ime ụlọ anyị buru ibu.
Ọkọlọtọ: na ngwugwu nke etiti, nke nwere a ọnụahịa € 9,99, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya HD ọdịnaya, nke zuru oke maka ọtụtụ televishọn anyị nwere n'ime ụlọ anyị. Anyị nwere ike ịhụ ọdịnaya dị na ihuenyo abụọ n'otu oge.
Adịchaghị: n'elu mkpọ nwere a ọnụahịa nke € 11.99. Anyị nwere ike ịhụ ya ruo na ihuenyo anọ n'otu oge ma dị na Ultra-HD, nke zuru oke maka gị nke nwere nnukwu ihuenyo.
N'ime atụmatụ atọ a, anyị nwere ike ịhụ otu ọdịnaya: niile klas Netflix maka mba anyị.
Netflix bụ cross-platform, nke pụtara na ọ dị maka sistemụ arụmọrụ niile na ọtụtụ ụdị ngwaọrụ. Anyị nwere ike ịhụ ọdịnaya Netflix na:
Kọmputa- Kpọmkwem site HTML5 ma ọ bụ Silverlight dakọtara nchọgharị.
Ekwentị na mbadamba: A gam akporo, iOS na Windows Phone.
Set-top igbe / Media Player: Apple TV, Chromecast, Vodafone.
Ndi Consolas: Nintendo 3DS, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360 na Xbox One.
Blu-ray Player na "smart" ike: LG, Panasonic, Samsung, Sony na Toshiba.
La Ndabere kacha nta njikọ ele HD ọdịnaya bụ 5mb, Nke anyị nwere ike ịhụ ọdịnaya dị na mkpebi ndị a (ihe nchọgharị ndị ọzọ ezughị ezu):
Google Chrome (37 ma ọ bụ mgbe e mesịrị) ruo 720p.
Microsoft Edge ruo 1080p.
Internet Explorer (11 ma ọ bụ mgbe e mesịrị) ruo 1080p.
Safari ruo 1080p na Mac OS X 10.10.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
N'ụzọ ezi uche dị, ọ dịghị onye na-enwe obi ilu banyere ihe na-atọ ụtọ na ogo nke nnyefe ahụ (ọ ga-enwe obere mbelata, dịka ọmụmaatụ) ga-akawanye mma karịa njikọ anyị.
Ọ bụrụ na ị nwere ụmụntakịrị n'ụlọ, Netflix na-enye a Ngalaba umuaka nke ahụ nwere ike ịmasị gị. Dika ndi oru nwere ike inweta akwukwo a dum, n’adịghị ka ọrụ ndị ọzọ, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ọdịnaya maka ụmụaka nọ n’afọ iri na abụọ. Enwere ọrụ ndị ọzọ na Spain nwere ọtụtụ katalọgụ maka ụmụaka karịa Netflix mana, n'ọnọdụ ndị ahụ, ọkachasị na fim, ọtụtụ ọdịnaya a dị naanị ma ọ bụrụ na akwụ ụgwọ ngwugwu, dị ka ihe nkiri ma ọ bụ usoro. Ihe dị mma banyere Netflix bụ na ihe niile enwere, anyị nwere ike ịhụ.
Iji mara ma ọdịnaya a masịrị gị, dị ka ihe niile metụtara Netflix, ihe kachasị mma bụ na ịmalite ọnwa ikpe ma lelee ya n'onwe gị mana, dịka m ga-ekwu n'okpuru, ị ga-eburu n'uche na Netflix Spain dị obere na ọnwa ndị a bụ ọnwa mbụ ya n’obodo anyị.
Ọ bara uru?
Ajụjụ ahụ enweghị azịza dị mfe. Ọ bụrụ na ajụrụ ajụjụ a ugbu a (Nọvemba 2015), aga m amaja ikwu ya na Spain, ee e. Ọbụbeghị. Typesdị ọrụ ndị a bụ ọdịnihu nke ntụrụndụ, mana ọ bụghị ihe niile dị ugbu a. Akwụkwọ ndekọ Netflix ugbu a, na-ekwukarị banyere Spain, dị ụkọ, nke mere na, ọ bụrụ na ịnwale ya, ọ ga-abụ na ị ga-akagbu aha ahụ mgbe ọnwa mbụ gachara. Nsogbu maka Netflix bụ na anyị na-ahụ obere katalọgụ ugbu a ma n'oge na-adịghị anya anyị kwụsịrị iji ya, yana eziokwu ahụ bụ na anyị enweghị ụzọ dị mfe iji hụ ihe ọdịnaya ya. Ọ bụrụ na anyị ahụ obere ugbu a na n'ọdịnihu anyị enweghị ike ikwenye na katalọgụ ahụ abawanyela, ha nwere nnukwu nsogbu. Ha kwesiri inye anyi uzo iji hu ma odi nma na odinihu ma obu otutu n'ime anyi ga-ahapuru anyi ihe mbu na nke ojoo.
Dekọọ ọdịnaya Netflix
Netflix anaghị anabata ụmụ amaala idekọ ọdịnaya ọ na-enye, mana enwere ụzọ mgbe niile. Maka nke a, anyị ga-achọ sọftụwia nke atọ nke ga - enyere anyị aka ịdebe vidiyo na egwu a na - egwu na kọmputa anyị, dị ka mmemme ndị a:
ScreenFlow na Mac: ngwa nke m na-eji kemgbe ọtụtụ afọ, ọ daabeghị m ScreenFlow. Ọ bụ eziokwu na ọ dị oke ọnụ, mana ọ nwere nchịkọta akụkọ vidiyo nke ya ma ọ dị mma (n'akụkụ ụfọdụ) karịa iMovie. Ọ bụrụ na ị nwaa ya, ọ ga-amasị gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ nhọrọ efu, ị ga-eji QuickTime na ngwa ọzọ na-enye gị ohere ijide ụda, nke na-adịchaghị mma.
CamStudio na Windows: Ngwa n'efu ndị ọrụ Windows dị ka CamStudio. Ozi ọma ahụ bụ na, na mgbakwunye na anaghị efu otu euro, ọ na-edekọ vidiyo na ọdịyo.
Freeseer na Linux: a free emeghe iyi nhọrọ na-eme ihe ma ọ bụ obere otu ihe ahụ dị ka CamStudio. I nwere ike ibudata ya na HERE.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, nke ọ bụla na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ma enweghị m ike ịme nkuzi ebe a maka mmemme ọ bụla.
Usoro maka Netflix
Netflix nwere menu nzuzo. Iji banye na menu a, anyị ga-agbanye igodo Shift + Alt (wee pịa, ọ bụrụ na anyị nọ na Mac) site na vidiyo Netflix ọ bụla. N'otu oge na menu anyị na-aga «Stream Manager» na ebe anyị nwere ike ijikwa nchekwa ahụ. Ọ bụrụ na njikọ ahụ dị ezigbo mma, anyị nwere ike tinye ya na ala, nke ga - eme ka ọ dị mma.
Lelee playback Ntọala
Netflix ga-enye anyị ohere ile ọdịnaya dị na HD (mgbe ọ dị) ma ọ bụrụhaala na anyị nwere njikọ nke opekata mpe 5mb. Mana enweghi uru ọ bụla nwere ike ịnwe ma ọ bụrụ na anyị nwere nhazi adịghị mma. Iji jide n'aka na anyị hụrụ ya kachasị mma enwere ike ị ga -
Anyị na-etinye pointer na akuku aka nri elu wee pịa Akaụntụ gị.
Ugbu a, ka anyị Ntọala usoro.
Lee, anyị ga-ahọrọ ndị kasị mma kwere omume, ọ bụrụhaala na njikọ anyị dị ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ na anyị ahụ na e nwere he ma ọ bụ na anyị na-ahụ ya pixelated, anyị nwere ike belata àgwà.
Họrọ nhazi oge
Mgbe ọ bụla enwere ike, ọ kachasị mma ile ihe nkiri, usoro ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ oge mgbe ndị mmadụ na-anọkarị n’ụlọ. Agbanyeghị na ụdị ọrụ ahụ agaghị ata ahụhụ, mgbe chi jiri ruo elekere abụọ nke ụtụtụ. Nwere ike ikwu na site na elekere asatọ nke abalị ruo elekere abụọ nke ụtụtụ bụ mgbe enwere ọtụtụ mmadụ na-arịọ ọdịnaya yana ogo na-adaba. Ọ bụrụ na ị ga-ele ihe nkiri ma nwee oge ụfọdụ na mpụga oge ndị ahụ, jiri ohere ahụ.
Mee ka ndepụta okwu gụrụ
Ọ bụrụ na anyị tinye ndepụta okwu ọ bụ ịgụ ha, nri? Na ịgụ ha, anyị ga-ahụ akwụkwọ ozi nke ọma. Ọ bụrụ na ụzọ ndepụta okwu gosipụtara abụghị nke kachasị mma maka gị, naanị ị ga-agbanwe etu esi ahụ ha. Maka nke a, anyị ga-eme ihe ndị a:
Anyị pịa Akaụntụ gị.
Anyị na-aga Ndepụta Okwu.
Ọzọ ị ga-ahụ ihe dị ka njide gara aga. N'ebe ahụ họrọ nhazi kacha mma maka gị.
Meziwanye ahụmịhe gị na mgbakwunye maka Chrome
Agbanyeghị Netflix nwere ihe niile ịchọrọ, enwere ike ịkwalite ya ma ọ bụrụ na anyị wụnye ndọtị na ihe nchọgharị Chrome dị ka ndị a:
Flix Gbanwee: Ọ ga-ekpochapụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, na anyị niile ndị na-ekiri ihe nkiri / seriéphiles nwere phobia pụrụ iche. Ọ ga-enyekwara anyị aka ịhụ ndụmọdụ, ozi ọdịnaya, wdg. I nwere ike ibudata ya na HERE.
Netflix Mmezi: Site na ndọtị a anyị nwere ike ịhụ ozi na faịlụ ahụ, trailers, echiche na ụdị ozi niile ga - enyere anyị aka ịmata ma fim ma ọ bụ usoro ọ bara uru. Nwere ike ibudata ya ebe a.
Enwere ụfọdụ ọdịnaya dị naanị ma ọ bụrụ na anyị nọ mpaghara kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ihe m na-anaghị eme, mana enwere ọtụtụ ndị ọrụ Netflix na-eme ya ka ha nwee ike ịnweta ọdịnaya ha na-agaghị ahụ na mpaghara ala ha.
Jiri mkpirisi kiiboodu
Ọ bụrụ na ị na-ele Netflix na kọmputa, ọ kachasị mma ijikwa vidiyo site na keyboard na ụzọ mkpirisi ndị a:
Ogwe ma ọ bụ Tinye: kpọọ / kwusi.
F igodo: tinye ihuenyo zuru oke.
Zọ mgbapụ: pụọ na ihuenyo zuru oke.
Mgbanwe + aka ekpe: laghachi azụ.
Mgbanwe + aka nri: ịga n'ihu.
Up / Down: mụbaa / belata olu.
M igodo: ogbi.
Nsogbu Netflix na Movistar
Ọtụtụ bụ ndị ọrụ Movistar ndị mere mkpesa banyere ogo nke nnyefe Netflix. Onye ọrụ ahụ enyelarị ihe omume ya, na-ekwu na ọ naghị ejedebe okporo ụzọ iji merụọ asọmpi ahụ na Netflix ga-enye nsụgharị ya na Disemba. Nsogbu a na - eme Movistar ka ọ ghara ịdị na nke Netflix nwere aha, Peering. Gịnị bụ Peering? Peering bụ «njikọ nke afọ ofufo nke netwọkụ na-anọghị nke ọma na ntanetị iji gbanwee ahịa nke ndị ahịa nke netwọkụ ọ bụla ". I nwere ike ikwu na ọ bụ nkwekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ Iji nye ọrụ ka mma, nkwekọrịta nke o yiri ka, n'oge ahụ, Movistar na Netflix abanyela aka, ya mere ogo dị ala karịa ndị ọrụ ndị ọzọ ga-abanye ya.
Ndị ọzọ na Netflix
Yomvi bụ ndorodoro iti Netflix meriri ugbu a. Ọ bụ nke Movistar nwere Na, ọ bụ ezie na katalọgụ ahụ abụghị nke zuru oke na ụwa ma nwee ọdịnaya nke enwetara site na ịnweta ụfọdụ ngwugwu, n'oge ọ nwere katalọgụ karịa Netflix. Enwere ihe karịrị ihe nkiri 2.000, usoro na akwụkwọ akụkọ anyị ga-enwerịrị ha ruo oge a kara aka (ihe nkiri ọ bụla, usoro ma ọ bụ ihe nkiri ga-adị ruo oge ụfọdụ), nke bụ mgbe ụfọdụ ọtụtụ ọnwa.
Ọ bụrụ na akwụ ụgwọ ihe nkiri Cinema, katalọgụ ahụ ga-abawanye ụba na otu na usoro ahụ. Nsogbu bụ na ngwugwu ihe nkiri na-efu € 9 na usoro usoro € 5. Ihe dị mma banyere Netflix bụ na anyị nwere ike ịhụ katalọgụ ya niile ka ọ dị, na-enweghị oke nke na-enye anyị ezé ogologo iji hụ akwụkwọ mpịakọta nke ihe nkiri anyị na - enweghị ike mụta nwa.
Ọrụ yiri Yomvi bụ Wuaki.tv, nwere ọdịiche dị mkpa, na anyị nwere ike ịgbazite fim. Na mgbakwunye, ihe nkiri anyị nwere ike ịgbazite na Wuaki.tv nwere ọnụ ala karịa na ọrụ ndị ọzọ dịka iTunes ma ọ bụ Google Play, yabụ anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ihe nkiri maka € 1.99.
Wuaki.tv na-enye anyi ohere ị debanye aha na n'efu, ma katalọgụ pere mpe ma ọ bụrụ na anyị anaghị akwụ ụgwọ maka ihe. N'ezie, ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ n'ụdị ụlọ ahịa vidiyo, ikekwe Wuaki.tv kwesịrị ịbụ nhọrọ anyị.
Ọ bụrụ na ihe ị nwere mmasị na ya bụ ikiri ihe nkiri na-achọ ka ụlọ ahịa vidiyo ochie, nhọrọ ọzọ bụ Nubeox. Na Nubeox, ọrụ nke Antena 3 nwere, anyị na-ahụ ihe nkiri ọ bụla dị na DVD / Blu-Ray, na ọtụtụ oge na ọnụ ala karịa na nyiwe ndị ọzọ. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nhọrọ ọzọ bara uru ịtụle iji hụ sinima na-achọ. N'ezie, dozie pọtụfoliyo. Ọ bụ ihe ị ga - enwe ike ịhọrọ ụdị ọdịnaya ị ga - ahụ.
TotalChannel na-enye anyị ngụkọta nke ụzọ ịkwụ ụgwọ 12, dịka AXN ma ọ bụ FOX. A na-agbasa ihe nkiri na ihe nkiri 100 na channelụ ndị a kwa izu, nke mere ka ọ bụrụ ọrụ ịtụle. Ọ na-enye anyị ohere nke ịdekọ ọdịnaya na ihe niile ha na-enye nwere ike ịlele na ịchọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ihe nkiri na usoro » Netflix na Spain. Ihe niile ịchọrọ ịma banyere ọrụ na-eduga gụgharia ọdịnaya
yudeisy Rodriguez dijo
nweta ihe ị chọrọ
Zaghachi yudeisy Rodriguez
InnJoo InnWatch 2, a SmartWatch gbara gburugburu ma dị ọnụ ala [Nyocha]
Ebumnuche 6 mere na ị gaghị azụta smartphone dị elu